लकडाउनका कारण केहि खान नपाएपछि गर्भवती महिलाको मृ.त्यु – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/लकडाउनका कारण केहि खान नपाएपछि गर्भवती महिलाको मृ.त्यु
लकडाउनका कारण केहि खान नपाएपछि गर्भवती महिलाको मृ.त्यु
काठमाडौं । पाकिस्तानमा कोरोना भाइरसको कारण आर्थिक संकट बढ्दै गएको छ । पाकिस्तानमा खानका लागि केहि नपाएका कारण मानिसहरु भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।
यसैबीच भोकका कारण एक गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको छ । कोरोना भाइरसको प्रकोप रोक्नका लागि सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण पाकिस्तानमा एक गर्भवती महिलाको निधन भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।
सिन्ध प्रान्तको मीरपुर खास जिल्लामा उक्त घटना भएको बताइएको छ । एक्सप्रेस न्युजमा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार मीशपुर खा जिल्लाको शहर झडोमा एक ४५ वर्षीया गर्भवती महिलाको खानेकुरा खान नपाएपछि मृ,त्यु भएको बताईएको छ ।
रुबिना नामकी ति महिलाका श्रीमान अल्लाबख्सले लकडाउनका कारण आफूसँग केहि काम नभएको र त्यसलाई लिएर श्रीमती चिन्तित बन्दै आएको बताएका थिए ।
खान नपाएका कारण श्रीमतीको मृत्यु भएको बताउँदै उनले भने, ‘६ छोराछोरी र आफूलाई कतैबाट राहत नपाएको आएन, गर्भावस्थामा यसै त गाह्रो हुन्छ, झनै खान नपाउँदा के होला ? केहि खान नपाएपछि गर्भवती श्रीमतीको मृ,त्यु भयो ।’
आफूसँग श्रीमतीको अन्तिम संस्कार गर्ने समेत पैसा नभएको बताउँदै उनले छिमेकीसँग पैसा मागेर श्रीमतीको अन्तिम संस्कार गरेको बताए ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म पाकिस्तानमा कोरोना भाइरसको महामारीक कारण १६८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८ हजार ३४८ जनालाई संक्रमण भएको छ।
कोरोना भगाउन स्यानिटाइजर पिउँदा ३ जनाको मृ’त्यु, ४ जनाले गु’माए दृष्टि !( पूरा पढ्नुहोस)
कपाल र अनुहारको लागि यति धेरै फाईदाजनक बियर
फेरी थपीए १३ जना कोरोना संक्रमित ब्यक्ति, आज एकैदिन २४ जनामा संक्रमण, नेपालमा संक्रमितको संख्या १३४ पुग्यो
ब्राजिलमा कोरोनाबाट एकैदिन ६ सयको मृत्यु, १७ हजार संक्रमित
कोरोना संक्रमणका कारण पाटन अस्पतालमा एक जनाको मृत्यु !